Ciidamada Dowlada Soomaaliya iyo kuwa AMISOM oo gudaha u galay Magaalada Jowhar ee Gobolka Sh/Dhexe
Ciidamada Dowlada Soomaaliya iyo kuwa AMISOM oo gudaha u galay Magaalada Jowhar ee Gobolka Sh/Dhexe.
Ciidamada Dowlada Soomaaliya iyo kaashanaya kuwa AMISOM ayaa lagu soo waramayaa inay kaabiga ku haayaan magaalada Jowhar ee xarunta gobolka shabeelada dhexe kadib markii ay isaga baxeen kooxda Al-shabaab.
Wararka ayaa sheegay in ciidamada ay gaareen deegaanka Koongo oo wax yar ujira magaalada Jowhar, iyagoo aan la kulmin wax iska caabin ah oo kaga yimid dhanka Al-shabaab.
Goobjooge ku sugan magaalada Jowhar ee xarunta gobolka shabeelada Dhexe ayaa u xaqiijiyay Shabakada wararka deegaan.com inay arkayeen maleeshiyaad fara badan oo ka tirsan Al-shabaab oo dhanka waqoyi iyo dhanka bari uga baxaya magaalada.
Sidoo kale goobjoogaha ayaa noo sheegay in Al-shabaab ay sii daayeen markii ay ka baxayeen magaalada maxaabiistii ku jirtay xabsiga, iyadoo wararku sheegayaan in Al-Shabaab ugu horyantii laga saaray Degmada Mahadaay.
Dhinaca kale xaalada degmada Jowhar ayaa ah mid aad u kacsan waxaana xiran goobaha ganacsiga iyo Iskuulada, mana jiraan wax isa socod ah oo magaalada ka jira cid walbana gurigeeda ayay ku sugan tahay, waxayna wararku sheegayaan in Ciidamada Dowladda iyo kuwa AMISOM ayaa gudaha u galay Magaalada Jowhar.